ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ်): ခေးရော့စ်ဆိုတာ #$%*@#$
ကိုယ့်ရဲ့နာမည် ---------- chaos
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် ---------- ခေးရော့စ်၊ ကြေးအိုး၊ ကြေးအိုးလေး၊ ခေးခေး၊ ညီမလေး၊ အစ်မခေး၊ ချော၊ မချော
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ် ---------- မိဘအိမ်မှာ (အခုလက်ရှိကို ပြောတာ အဟဲ)
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် ---------- အင်းးးးအမြဲပြောနေလို့ အားမှာမဟုတ်ဘူး။ မပေးတော့ဘူးနော်။
အရောင်ဆိုရင် ---------- အဖြူ၊ အနီ၊ အနက်
အ၀တ်အစားဆိုရင် ---------- လိုက်မယ်ထင်တာ အကုန်ကြိုက်တယ်။ ဖိနပ်ကတော့ All Star ခရေဇီ
အစားအစာဆိုရင် ---------- ကြက်ကောင်လုံးကြော်၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ ထမင်းပေါင်း ဆက်ပြောရင် မကုန်တော့ဘူး။
ပစ္စည်းဆိုရင် ---------- ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်။
သီချင်းဆိုရင် ---------- ဆူဆူညံညံတွေ နားထောင်တော့ လူများတွေက နားငြီးတယ်တဲ့။
စာရေးဆရာ ---------- တော်တော်များများကိုကြိုက်တယ်။
စာအုပ် ----------- တော်တော်များများဖတ်ဖြစ်တယ်။
Life style ---------- ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူက ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲရှိနေရင် ပြည့်စုံပါပြီ။ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ အဲ့ဒီခဏတာမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူနဲ့ ကုန်ဆုံးခွင့်ရချင်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ ---------- သီချင်းနားထောင်တယ်။ စာအုပ်ဖတ်တယ်။ ဘလော့ရေးတယ်။ ကဗျာရေးတယ်။ ကဗျာတွေ ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်တယ်။ ဂီတာတီးတယ် ( ဘေးကလူများ နားပိတ်ထားရသည်။ အသံသေး အသံကြောင်နဲ့ နှောင့်ယှက်သောကြောင့်)
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် ---------- သူပေါ့။ ပေးမယ်ပြောပြီး အခုထိမပေးသေးဘူး။ Pooh ရုပ်လေးလိုချင်လို့ပါဆို။ အကြီးကြီးလေး ဘာလေးနဲ့ ဟွန့်။
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက ---------- မိဘနှစ်ပါး၊ ကျွန်မ၏ အဒေါ်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ “ သူ ”
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက ---------- My Parents, My teacher နဲ့ ကျွန်မကို မမွေးခဲ့သော အားလုံးက လေးလေးစားစားခေါ်သော ကျွန်မတို့ရဲ့ အမေ၊ ပြီးတော့ My quarter half :P
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ---------- အစ်မ၊ ညီမလေးနဲ့ ကျွန်မကို နားလည်ပေးသော သူငယ်ချင်းများ
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက ---------- ကျွန်မရဲ့ “သူ”
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက ---------- လူများအတင်းပြောခြင်းဖြင့် အချိန်ကို ကုန်ဆုံးနေသော လူများ။ ဝေဖန် အပြစ်တင်ရတာကို အားရကျေနပ်သူများ။
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်---------- အတူတူလျှောက်လည်ပြီး အဖေတွေ့မှာစိုးလို့။ အဲ့ချိန်က ရင်အခုန်ဆုံးပဲ။ တွေ့များတွေ့ရင် ဆိုပြီးတော့လေ။ အမယ်လေးနော် ပြောရင်းတောင် ရင်ခုန်လာပြန်ပီ။ :P
အကြောက်ဆုံးအချိန် ---------- သရဲနှင့်တွေ့မည့် အချိန်။ ( ရှိတာ မရှိတာ အပထား။ ကြောက်တာကတော့ အသားကုန်ပဲ)
အပျော်ဆုံးအချိန် ---------- နှစ်ယောက်အတူရှိချိန်။
အမှတ်တရနေ့ ---------- January 13, February 16 and 27
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု ---------- သူ အမြဲကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့……
အချစ်ဆိုတာ ---------- နှလုံးသားကနေ စည်းချက်ညီညီနဲ့ လှပတဲ့ သံစဉ်လေးတွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကဗျာ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ရတဲ့ အချိန်တစ်ခုမှာ အဲ့အချစ်ဆိုတဲ့ကောင်က နှလုံးသားထဲမှာ အခန့်သား နေရာယူပြီးနေပြီလေ။
အမုန်းဆိုတာ----------အချိန်တော်တော်များများကို ခိုးယူစားသုံးပြီး အတိဒုက္ခရောက်အောင် နှိပ်စက်တဲ့အရာ။
အလွမ်းဆိုတာ----------မရှိရင် ပိုကောင်းမယ်။ လွမ်းရတာ မောလို့ဆိုသလိုပဲ။ အင်း….ဒါပေမယ့် အလွမ်းဆိုတာ အချစ်ရဲ့ တမန်တော်များလား။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ---------- နွံတစ်ခုလိုပဲ။ ရုန်းလေ နစ်လေ။
ဘ၀ဆိုတာ ---------- Life is life but always full of ups and downs. ဘ၀အကြောင်းကို ဒီလို ကဗျာလေးရေးဖူးတယ်။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ---------- ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ အမြဲပြောဆိုဆုံးမတယ်။ နားလည်တယ်။
ချစ်သူဆိုတာ ---------- အရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူ၊ နားလည်မှု၊ မေတ္တာ နဲ့ သစ္စာတရားကို စွဲမြဲထားပြီး မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်နေတဲ့သူ၊ ချစ်မိတဲ့သူ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ် ----------တဇွတ်ထိုး၊ ခေါင်းမာတယ်။ ဒေါသကြီးတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ သွေးအေးပြီး ကလဲ့စားချေဖို့ အားထက်သန်တတ်တယ်။ တစ်ခုမှ မကောင်းဘူးနော်။ ခင်တော့ခင်တတ်တယ်။ ခင်ပြီဆို ရေပက်မ၀င်နဲ့ လေပေါတတ်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က ---------- Do unto others as you would have others do unto you
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း ---------- Whether you do right or wrong there may be at least one person to put the blame on you. It’s good to do your best regardless of people’s criticism.
ကဲကဲ အောင်မျိုးဟန်က တက်တယ်ဟ ဆိုလို့ ပြီးတော့ ကျွန်မ ဖိုးဖိုးတစ်ဝမ်းကွဲ ဂျူလိုင်ဖိုးဖိုးကလဲ ချက်တင်ကနေတက်တယ်ဟာတဲ့။ သူများကတက်လို့ လိုက်တက်ပြီးပြီ။ မနည်းတိုးတက်လိုက်ရတယ်။ ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့။ ကိုရန်အောင်ကြီး၊ ကိုအတာနဲ့ ယိမ်းနွဲ့ပါးမှ ညီအစ်ကိုများကို ဆက်တက်ချင်တယ်။ ရေးပေးမယ်မလား။ သိတယ်နော်။ ရုပ်ချောသဘောကောင်းကြီးတွေ။
Posted by Chaos at Tuesday, September 09, 2008
မင်းယွန်းသစ် September 9, 2008 at 3:10 PM
ဂိုဏ်းကျပ်ကြီးလို့လဲ ခေါ်သေးတယ်လေ... ငှက်ငှက်
မိုးကြယ် September 10, 2008 at 7:33 AM
ညီမရေ ရေးပြီးသွားပြီ၊ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Yan September 11, 2008 at 12:31 PM
layma September 11, 2008 at 10:43 PM
ဟိုလူကြီး.. ၀ယ်ပေးစရာရှိတာ မြန်မြန်ဝယ်ပေးလိုက်လေ..။
su wai September 12, 2008 at 2:28 PM
ပို့စ်တစ်ခုလုံးလဲ `သူ´တွေချည်းပါပဲလား ခေးရော့ရေ … အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားထဲမှာ မပြောမဆိုနဲ့ အခန့်သား နေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့ အကောင်ကြီးပေါ့နော် :D :D
မစ်(စ်)သွန်းသွန်း September 20, 2008 at 8:52 AM
ခေးရော့စ် အကြောင်းလေး လာဖတ်သွားတယ်။ :)
ရှေးရေစက် November 26, 2008 at 2:51 PM
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ုကီး . အချစ်ဆုံးသူတယောက်..လူ့လောကုကီးကနေထွက်ခွာသွားလို့
ခံစားရလို့... မျက်လုံးထဲမှာ ..မျက်ရည်တွေလျှံကျလာနေဘီ...
ပူစူး @ ရှေးရေစက်